Cancer ကင်စာရောဂါ မရှိပါ
၂၉ နှစ်၊ ကျား၊ ဖြစ်တာ ၅ရက်ရှိပြီ အစာရောဂါလည်းရှိသည် မနက်စာစားပြီရင်အိပ်ချင်နေဆရာ ဇီးထုပ်ဖြစ်ဖြစ် ချင်တဲ့ဟာ တခုခုစားရင် သက်သာသည် ဘာရောဂါဖြစ်နိုင်လည်းဆရာ ကင်စာရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိလားဆရာ ကင်စာကကော အိပ်ချင်လားဆရာ
• Antral Gastritis အစာအိမ်ရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/antral-gastritis.html
• Belching လေတက်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/belching.html
• Bleeding Peptic Ulcer အစာအိမ်နာ သွေးယိုခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/bleeding-peptic-ulcer_25.html
• Digestive Myths အစားအစာမှာ အထင်မှားနေတာတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/digestive-myths.html
• Duodenitis အစာအိမ်အထွက် အူသိမ်ရောင်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/duodenitis.html
• Gastric cancer အစာအိမ်ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
• Gastric Juice အစာခြေအရည် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/gastric-juice.html
• Gastritis အစာအိမ်ရောင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/gastritis.html
• GERD (1) အချဉ်ရည် အထက်ဆန်ခြင်း (၁) https://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/heartburn.html
• Heartburn ရင်ပူခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/heartburn.html
• Medicine for Diseases of Digestive Tract အစာလမ်း လေနာရောဂါဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/gastric-cancer.html
• Peptic Ulcer Diagnosis လေနာရောဂါကို ဆေးစစ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/peptic-ulcer-diagnosis_25.html
• Peptic ulcer လေနာ ဆိုတာ ဘုရင်မှာလည်းဖြစ်သည် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/peptic-ulcer.html
Immunizations before marriage အိမ်ထောင်ပြုမည့် အမျ...
Marriage Advice သီတင်းမကျွတ်ခင် ဖတ်စေချင်
Water and pH ရေသန့်ဆိုတာ
Fetal length and weight ဗိုက်ထဲက ကလေးအတိုင်းအတာများ
ထိုမျှရာဇာ စောချုပ်ခြာတို့ သင်္ချာသရုပ် သေချာလုပ်
Cooking Oils စားသုံးဆီများ
Healthy Cooking Oils ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော စားသ...
Depo Provera သုံးလခံ ကိုယ်ဝန်တားထိုးဆေး
သက် နှင့် သပ်
Ectopic Pregnancy (2) ထူးဆန်းသည့်ကိုယ်ဝန် (၂)
Breast Milk မိခင်အစားအသောက်နဲ့ နို့ရည်
မှ နှင့် မျှ
မျှော် နှင့် မြော်
ဆုံ ဆည်း စည်း စီး ဆီး
Reading Room အိမ်ကစာဖတ်ခန်း
Unmarried Women မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ထောင်မပြုသူ အမျိ...
Dial type Blood pressure Apparatus ဒိုင်ခွက်ပါ သွေ...
HIV Prevention of mother-to-child transmission (PM...
Cut Both Ways ဖြတ်စရာတွေ
ရင် လျင် လျဉ် လျည် လျင်း လျဉ်း လျှင် လျက် လျှက် ယင်
Depression (4) စိတ်ကျရောဂါ ကမ္ဘာမှာ
ရွေ့ရှား နှင့် ရွေ့လျား
Pregnancy and HPV Vaccination သားအိမ်ဝကင်ဆာ ကာကွယ်...
Plastic and Health ပလတ်စတစ်စာများ
Bengal မှားအောင်လုပ်ထားတဲ့ ဘင်္ဂလား
Dashi and Sweetening Agents ဟင်းခပ်မှုန့်များ
Breast self-examination ရင်သားအား မိမိဖါသာစမ်းသပ်နည်း
အ အာ အား
Culture and Belief ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ယုံကြည်မှု
Freedom from deceit မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ
Rotavirus Vaccination ကာကွယ်ဆေး
ဂ နှင့် ဃ
Mandalay in Water color ပန်းချီထဲက မန္တလေး
The Ocean တို့ပင်လယ် ကျယ်ပါဘိ
Rheumatic Diseases Links လေးဘက်နာစာများ
Breast Lumps in Newborn Baby ကလေးငယ်နို့
You Betcha ကုလားတစ္ဆေ နဲ့ တရုပ်သရဲ
World Pharmacists Day ကမ္ဘာ့ဆေးဝါးပညာရှင်များနေ့
Atopic dermatitis နှင်းခူနာ
Allergy to Eczema မတည့်တာနဲ့ နှင်းခူနာ
ယမ်း ရမ်း ရန်း
ဘက် နှင့် ဖက်
One day political prisoner တရက်တိတိ အဖမ်းခံရဘူးခြင်း
Tagore and Influence တဂိုး နဲ့ တန်ခိုး
Mission Impossible မစ်ရှင် အင်ပေါဇဘဲလ်
ရင် နှင့် ယင်
Super malaria spreads in South East Asia အရှေ့တောင...
Danafil and Danazol ဆေးအမည် သတိထားပါ
Our Culture ယဉ်ကျေးမှုတရပ်
Ancient Bagan ရှေးခေတ်ပုဂံပြည်
လောကထိပ်ပန်ဂူဘုရား ကျောက်စာ သတ်ပုံ
Copy and Paste ကူးယူသုံးစွဲခြင်း
Blocked Tear Ducts မျက်ရည်လမ်းကြောင်းပိတ်ခြင်း
ယောက် နှင့် ရောင်
Before I die ကျွန်တော်မသေခင်တဲ့